Nandar's Life: December 2011
Posted by Nandar at 21:02 8 comments
ဒီ tag လေးကတော့ YouTube မှာတွေ့လို့ ဘလော့မှာလဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လုပ်မလားလို့ စဉ်းစားမိတာနဲ့ တင်လိုက်တာပါ။ ကိုယ့်အကြောင်းကို သူငယ်ချင်းတွေ ပိုသိအောင်လဲပါပါတယ်။ ကျွန်မ tag လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေကတော့ ကျွန်မဘလော့ကို လာလည်တဲ့ သူတွေအားလုံးကို tag ချင်ပါတယ်
Candy(မမကန်ဒီ)၊ သမီးစံ ၂ယောက်ထဲသူငယ်ချင်းကရှိတော့ tag လုပ်လိုက်ပါတယ်။
နာမည်အရင်းက Nandar Win ပါ။ မေမေကတော့ အငယ်လေးလို့ခေါ်တယ်(သမီးအကြီးဆုံးကို ဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲတော့မသိပါ)။ ညီမလေး ၂ယောက်က မမလို့ခေါ်တယ်။ ချစ်သူက အသဲလေးလို့ ခေါ်တယ် :)
How old will you be by your next birthday?
နောက်နှစ်ဆိုရင် အသက် ၂၂ နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တော်တော်အသက်ကြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီမှာ အသက် ၂၁ ပြည့်ပြီးရင် လူကြီး ပဲလေ ဒီ့ထက်ပိုပြီးရင့်ကျက်သင့်ပြီထင်ပါတယ်။
ကျွန်မငယ်ငယ်ကတည်းက ရေခဲမုန့်လုံးဝမကြိုက်ဘူး စားလဲမစားဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်စားရင်တော့ Coconut Ice Cream ကို ကြိုက်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်က အုန်းမွှေးလုံးနဲ့တူလို့။
အိမ်မှာ Pet လုံးဝမမွေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး သူတို့ရဲ့အမွှေးတွေကိုအရမ်းကြောက်တယ် ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြောင်တွေ ခွေးတွေမြင်ရင် ထွက်ပြေးနေတာ။ ခွေးတွေဘေးကဖြတ်သွားရင် မကိုက်အောင် လက်မကိုဖွက်ပြီး အသက်အောင့်ပြေးတာပဲ။ အဲ့လိုမျိုး သူငယ်ချင်းတို့ရောဖြစ်လားဟင်?
Pepsi ka လျက်ဆားနံ့နဲနဲရသလိုပဲ Coke ကတော့ coke အရသာရတာပေါ့နော် ဟဲဟဲ။
Soda or sports drink?
Soda ဆိုတာက Soft Drink ကိုပြောတာဆိုရင်တော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး Sports drink ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်။
Favourite soup ကတော့ Chicken and Corn Soup ပါ။ အငယ်ဆုံးညီမလေးက ထမင်းမစားတော့ သူ့ကို မေမေက ၀ယ်တိုက်ရင်းနဲ့ နဲနဲကျန်ရင် ကပ်ကပ်သောက်ရင်းကြိုက်သွားတာပါ။
Floral or musky perfume?
Floral perfume ကိုအကြိုက်ဆုံးပါ ရေမွှေးဝယ်တိုင်းအမြဲလိုလို floral scent ကို ရွေးပါတယ်
Autumn နွေပူပူကနေ ဆောင်းကိုကူးရတာ အနှစ်သက်ဆုံးအချိန်ပါပဲ။
Posted by Nandar at 19:522comments
Posted by Nandar at 06:163comments
Posted by Nandar at 22:315comments
ဒီပုံလေးက သူနဲ့ပထမဆုံး စတွေ့တော့ ပေးတဲ့ပုံလေးပါ။
ညတစ်ညမှာ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ကျွန်မ Gtalk က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုပြီး ၀င်ဖြစ်ခဲ့တယ်...အဲ့ဒီ့အချိန်မှာ ကျွန်မမသိတဲ့ account တစ်ခုက ကျွန်မကို invite လုပ်ထားတယ်...အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်သူလဲပေါ့ accept လုပ်လိုက်တယ်....ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောပြီး အဲ့ဒီ့ညက အိပ်ပျော်သွားတယ်...မနက်ရောက်တော့ တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ မေမေတို့က ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားကြတယ်...အိမ်မှာ ညီမလေးနဲ့ ကျွန်မပဲကျန်ခဲ့တယ် အဲ့ဒါနဲ့ Gtalk ကို ၀င်တော့ သူ့အကောင့်ဖွင့်ထားတာကိုတွေ့တာနဲ့ ကျွန်မလဲ ဘယ်သူလဲ ဘယ်ကလဲ ဘာလို့ ကျွန်မအကောင့်ကိုအပ်တာလဲပေါ့...သူလဲကျွန်မဘယ်ကလဲဆိုတာမသိဘူးတဲ့ ဒါနဲ့ကျွန်မလဲ "ဟင် ဒီလူက အဆန်းပဲ တစ်ခြားကျွန်မကို လာအပ်တဲ့သူတွေလိုလဲ မကျူဘူး မိန်းကလေးကို စိတ်မ၀င်စားတဲ့ပုံစံနဲ့"
အဖြစ်က ဒီလိုပါ သူက အချိန်ရှိခိုက် စာပဲကျက်နေတဲ့လူစားမျိုးပါ ခပ်အေးအေးနေတတ်တာကြောင့် သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းက သူ့ကွန်ပျူတာလာသုံးနေတုန်း သူ့ Gtalk က ပွင့်နေတာနဲ့ ကျွန်မအကောင့်ကို အပ်ပေးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ် သူပြောတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းဆိုတာလဲ ကျွန်မသိပ်မသိပါဘူး တစ်ခါ ၂ခါတော့ စာရိုက်ပြီးပြောဖူးပါတယ်...ဒီလိုပဲပေါ့နော် ချစ်သူတွေဖြစ်ဖို့ ဖူးစာပါတော့လဲ မြှားနတ်မောင်ရဲ့အကူအညီအရ တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်... အဲ့ဒီ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့နေ့က ကျွန်မသူနဲ့ စာရိုက်ပြီးပဲစကားပြောပါတယ် အွန်လိုင်းသဘောအရပေါ့ နောက်တော့ ဓာတ်ပုံအပြန်အလှန်ပို့ကြတယ်...၃ခါလောက်ပြောပြီး ကျွန်မ အင်တာနက် မသုံးဖြစ်တော့ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်မအဲ့ဒီ့အချိန်တုန်းက ထိုင်းဆိုင်တစ်ခုမှာ Waitress လုပ်ပါတယ် ကောလိပ် ပြီးတော့ Certificate ရတော့ အလုပ်ရတယ် အလုပ်၂ခုလုပ်တာပေါ့ မနက်ဆို Lab မှာလုပ်ပြီး ညမှာ ထိုင်းဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်...ကျွန်မက လူတစ်မျိုးပါ အလုပ်လုပ်နေရရင် မပင်ပန်းပါဘူး Workaholic လိုမျိုး ထူးဆန်းတာက အဲ့လို Work Mood က Work Uniform ၀တ်လိုက်မှာ ၀င်တာ...မဟုတ်ရင် အပျင်းထူပါတယ်...ဒါနဲ့ခုနက စကားကိုပြန်ဆက်ရရင် အွန်လိုင်းမသုံးတာ ၁လလောက်ကြာသွားတယ် ကျွန်မလဲ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပါပဲ...အရမ်းကြီးခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း အွန်လိုင်းမှာမရှိတာလဲ ပါပါတယ် သူ့ကိုလဲ မေ့နေတာပေါ့...
အပိုင်း (၂) ကို နောက်နေ့မှ ဆက်တင်ပါမယ်
Posted by Nandar at 21:274comments
ဒါကတော့ Nandar အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့ ဂိမ်းပါ ၀ယ်ထားတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကလားမသိဘူး အခုမှ ကျောင်းပိတ်တာနဲ့ မိုးလင်းကထဲကနေ ညထိ ထိုင်ဆော့တယ် ထမင်းစားရေချိုးတော့ ကြားထဲမှာလုပ်တာပေါ့နော် ဟိ...အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိဘူး နောက်ပြီး ဒီဂိမ်းကလဲ Game Over ဆိုတာမရှိဘူးလေ ကိုယ့်ဆီက ၁ second ဆို ဂိမ်းထဲမှာက ၁မိနစ်ဆိုတော့ ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိသာပါဘူး...ဆော့တာ ၃ရက်လောက်ရှိသွားပြီ Nandar ရဲ့ game ထဲက Sims တွေရဲ့နာမည်တွေက အဖေက ပြေတီဦး အမေက Eindra Kyaw Zin သမီးအကြီးက Pyay Thu Dra Oo သားငယ်လေးက Benji Oo ဟဲဟဲ ပြေတီဦး နဲ့ Eindra Kyaw Zin ကတော့ အခု အဘိုးကြီးနဲ့အဘွားကြီးဖြစ်နေပြီ ဂိမ်းထဲမှာ...
မှတ်ချက်....ကျမ နာမည်ကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးတဲ့အကြောင်းအရင်း အကြီးကြီးရှိပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ ကျမ ကွန်ပြူတာထဲမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်က ကြောင်နေတာ ဘယ်လောက် uninstall လုပ်ပြီး ပြန် install လုပ်လုပ် ထပ်ဆင့်တို့ ပက်ဆင့်တို့ ရေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီကြပါဦး????
Posted by Nandar at 02:295comments
ဒီနေ့က အခု ၂၀၁၁ ရဲ့ ဒီဇင်ဘာမှာ Nandar အတွက် ကံအကောင်းဆုံးနေ့လို့ ပြောလို့လဲ မမှားဘူးထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့… ဒီနေ့မနက် ၅နာရီခွဲ alarm ပေးထားတယ် alarm က ထမြည်တော့ နိုးသွားတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်က မနက် ၆နာရီစမှာဆိုတော့ မြန်မြန် မျက်နှာသစ် သွားတိုက် မျက်ကပ်မှန်တပ်ပြီး (အော် Nandar က မျက်ကပ်မှန်တပ်ရတယ် ဒီအကြောင်းကို နောက်ပို့စ်တစ်ခုမှာ သေချာပြောပြမယ်နော်) uniform လဲ ပြီး သွားတယ် အလုပ်နဲ့အိမ်နဲ့က ဘယ်လောက်မှမဝေးပါဘူး ကားမောင်းရင် ၅မိနစ်လောက်ပဲမောင်းရတယ် လမ်းလျှောက်ရင်တော့ နာရီဝက်လောက်ကြာတယ်…အလုပ်ကိုရောက်တော့ အလုပ်တမ်းစရတယ် ၆နာရီထိုးဖို့ ၄မိနစ်အလိုပေါ့…အဲ့ဒါနဲ့ အလုပ်က ၂နာရီပြီးတယ် Nandar က အချိန်ပိုင်းအလုပ်ပဲလုပ်တာလေ အခုက ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်နေတော့ အချိန်များများလိုချင်တယ် ဒါနဲ့ အပေါက်ဆိုးတဲ့ မန်နေဂျာကြီး ဆီမှာ ဟိုတစ်နေ့က အလုပ်များများပေးဖို့သွားပြောထားတာ ဒါနဲ့ပြန်ခါနီး မန်နေဂျာကခေါ်ပြီးတော့ Nandar 2012 February အတွက် အချိန်စာရင်းပေးထားတဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဆီက full time အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကောင်လေးက Part Time ဖြစ်သွားလို့တဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ အလုပ်ရဖို့ သေချာသွားတာပေါ့..အိမ်ပြန်လာတော့ Nandar ညီမ က ဒီနေ့ စာမေးပွဲ result တွေထွက်တယ်တဲ့ တကယ်က Monday မှ ထွက်ရမှာကို အဲ့ဒါနဲ့ အမောတကော ရေမချိုးသေးပဲ စစ်ကြည့်လိုက်တယ်………….ဟေးးးးးး ပျော်တယ်စေ့ ဒီ semester ၃ဘာသာ ယူတာ ၃ခုလုံးအောင်တဲ့အပြင် တစ်ခုက HD တစ်ခုက C နောက်တစ်ခုကတော့ P ပဲ။ မဆိုးပါဘူး Pass ပဲဖြစ်တဲ့ unit က Physic လေ လုံးဝမရဘူးထင်ခဲ့တာ ၅၆ မှတ်နဲ့ကပ်အောင်တယ် အောင်မလေး ကံကောင်းတာပဲ။ ဒီနေ့ ကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးက တော့ ဒါပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက်တော့ အရမ်းကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့အရာတွေ အောင်မြင်တော့ တော်တော်လေး ပျော်မိတယ်… အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ချင်ပြီး ပိုက်ဆံစုနေတဲ့အကြောင်းက ဟိဟိ နောက်မှပဲပြောပြတော့မယ်… Good Night >_<
Posted by Nandar at 02:150comments